Igumbi eline-en-suite kanye negumbi lokuhlala - I-Airbnb
Igumbi eline-en-suite kanye negumbi lokuhlala
Ascot Vale, Victoria, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Peter And Pam
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Peter And Pam izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Sinikeza amakamelo angasese angu-2 endlini endala ebuyiselwe emgwaqweni wamagugu 5km ukusuka edolobheni. Jabulela igumbi lokulala langasese, i-en suite kanye negumbi lokuhlala phansi njengoba abanikazi bephezulu. Sihamba ibanga ukuya kwithilamu, isitimela kanye nendawo yokudlela enempilo.
Ikhaya lethu lisohlwini lwamagugu angaphambili, emgwaqeni osohlwini lwamagugu amakhilomitha angu-5 ukusuka edolobheni. I-Flemington ne-Moonee Valley Racecourses zisondelene kakhulu nezithuthi zomphakathi kuzo zombili lezi zifundo zomjaho kanye nebanga lokuhamba ngezinyawo ukuya e-Show Grounds.
ubusuku obungu-7 e- Ascot Vale
Umgwaqo wethu usohlwini lwamagugu futhi unezinhlobonhlobo zamakhaya amadala. Kuyibhodi lesimo sezulu elibuyiselwe elingaphambili elilodwa futhi litholakala emgwaqeni othule onamaqabunga. I-Ascot Vale iseduze nedolobha futhi iseduze nezinye izindawo ezaziwa kakhulu njengoPuckle Street kanye neLygon Street. Indawo yethu yezitolo ye-Union Road inezindawo zokudlela nezindawo zokudlela eziningi ezihlukahlukene. Isevisi yebhasi iya eWilliamstown ngeFootscray. Ithilamu nesitimela esiseduze sikuyisa edolobheni.
Ibungazwe ngu-Peter And Pam
Singabavakashi abazimisele futhi siyakujabulela ukwabelana ngezindaba nolwazi . Siyazi futhi ukuthi ezinye izihambeli ziyafuna futhi zilindele ubumfihlo bazo. Singanikeza isiphakamiso nosizo ukuze ujabulele leli dolobha elikhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ascot Vale namaphethelo